AKHRISO: Shuruuraha ay ku xireen musharraxiinta Galmudug ka qeybgalka Doorashada xilka madaxweynaha | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRISO: Shuruuraha ay ku xireen musharraxiinta Galmudug ka qeybgalka Doorashada xilka madaxweynaha
AKHRISO: Shuruuraha ay ku xireen musharraxiinta Galmudug ka qeybgalka Doorashada xilka madaxweynaha
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Afar ka mid ah Musharaxiinta u taagan qabashada xilka Madaxweynaha Maamulka Galmudug, ayaa waxa ay soo saareen 7 qodob oo ay sheegeen haddii la fuliyo inay ka qayb galayaan doorashada Madaxtinimada Galmudug.
Khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada Maamulka Galmudug, ayaa cirka isku sii shareeraysa, xilli Madaxweyne Xaaf isaga dhankiisa hawlo doorasho uu ka wado Magaalada Gaalkacyo.
War-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen Musharaxiinta kala ah C/raxmaan Odawaa , Kamaal Guutaale, Cabdullaahi Faarax wehliye iyo Cabdi Axmed ( Cabdi Dheere) ayaa waxaa ay uga hadleen Natiijada kasoo baxday baaqyadii ay horey u gudbiyeen iyo xal u heli Khilaafka ka taagan Doorashada Galmudug.
Waxa ay sheegeen haddii la fuliyo qodobada ay soo bandhigeen diyaar inay u yihiin ka qaybgalka doorashada Galmudug.
ka qeybgalka Doorashada xilka madaxweynaha
Shuruuraha ay ku xireen musharraxiinta Galmudug